The Tyrant's Guardian dia mpamosavy ratsy - Vakio ny Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Mpamosavy ratsy fanahy ny mpiambina an'i Tyrant Average 4.4 / 5 avy amin'ny 13
Toa tonga nofo indray ao amin'ny tontolon'ny tantara nofinofy momba ny tantaram-pitiavana feno r. Ary tsy toetra mahazatra fotsiny, fa toy ny mpamosavy mamoy ny ainy amin'ny fitarihana lehilahy adala!
Soa ihany fa misy 200 taona lava mandra-piterahan'ny mpilalao fototra ary hitombo amin'ny andraikiny.
Ankehitriny satria tsy tandindomin-doza ny aiko, tokony hiala sasatra ve isika amin'ny fomba hisorohana ny fahafatesana?
Na izany aza, tsy nanamarika antsipiriany tena lehibe momba ny fotoana handaniako 'azo antoka amin'ny loza efa akaiky' aho. 200 taona dia tsy fotoana fohy niandrasana ary tamin'ny fotoana nisehoan'ny tarehin-dehilahy tanora teo alohako dia hadinoko tanteraka ny volavolan'ilay tantara voalohany!
Na izany na tsy izany, izao dia tonga tamin'ity, ny fomba tokana ahafahana miaina dia ny fananganana ny fitarika lahy ho olon-dehibe salama saina! Ny dingana voalohany hisorohana ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny fitarihana lehilahy lozabe dia ny fanovana ny fiainan'ity zaza natahotra be ity.
“Tsy dia mety loatra ho anao ny fampisehoana tampoka ahy eo am-baravaranao, azafady. Azonao atao ny miteny amiko hoe handeha aho, tsy maninona. ”
“Hadalana. Moa ve aho toa olona mety hanelingelina zazalahy kely toa anao? Ary inona no tianao holazaina amin'ny hoe ho salama ianao na dia asaina mandeha aza? Tsy toy ny hoe aiza no hiverenanao, anaka. ”
Nitomany ilay zazalahy kely.
'O, tsy izany no izy.' Izany ve no eritreretin'ny mpamosavy raha nitomany izy.
Soraty ny tantara ary ankafizo ny tsara indrindra webcomics, webcomics wiki ratsy, webcomics tsara indrindra, webcomics ambony, webcomics werewolf, app webcomics, webcomics ratsy, webcomics yuri, webcomics olon-dehibe, webcomics pelaka, nsfw webcomics, lgbt webcomics, lisitra webcomics, webcomics feno volom-borona, webcomics fanta-daza, fomba fanaovana webcomics, webcomic romance, webcomics alfie, webcomics belfry, webcomics tsara, webcomics dnd, webcomics tg, webcom lesbiana, webcomic vampire, webcomics sci fi, webcomics tsara indrindra 2018, webcomics malaza, webcomics mampatahotra, reddit webcomics, webcomics somary, webcomics bl, webcomics mampihomehy, webcomics d, d webcomics, tranokala webcomics, tv tropes webcomics, webcomics review, webcomics online, webcomics zazavavy majika, webcomics reddit, webcomics vita tsara indrindra, webcomic line, webcomics transgender , webcomic lehilahy totohondry iray, webcomika mahaliana, ny webcomic gana, Webcomics manaparitaka, ny hevitra momba ny webcomics
Chapter 36	Jolay 17, 2021
Chapter 35	Jolay 10, 2021
Chapter 33	Jona 22, 2021
Chapter 32	Jona 21, 2021
Chapter 28	Febroary 25, 2021
Chapter 27	Febroary 20, 2021
Chapter 26	Febroary 16, 2021
Chapter 25	Febroary 2, 2021
Chapter 24	Febroary 2, 2021
Chapter 23	Janoary 18, 2021
Chapter 21	Janoary 1, 2021
Chapter 20	Janoary 1, 2021
Chapter 19	Janoary 1, 2021
Chapter 18	Janoary 1, 2021
Chapter 17	Janoary 1, 2021
Chapter 15	Janoary 1, 2021
Chapter 14	Janoary 1, 2021
Chapter 13	Janoary 1, 2021
Chapter 12	Janoary 1, 2021
Chapter 11	Janoary 1, 2021
Chapter 10	Janoary 1, 2021
Chapter 9	Janoary 1, 2021
Chapter 8	Janoary 1, 2021
Lord Baby dia mamorona tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana amin'ny vola
Fitiavana n fiainana
Manantanteraka ahy ianao